/ဘ‌‌လော့ခ်/Dianabol , ပြတိုက်/သင်ကရောင်းရန် Dianabol Powder အကြောင်းသိထားဖို့လိုအရာအားလုံးကို
အပေါ် Posted 12 / 27 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Dianabol, ပြတိုက်.
သူတို့ကိုသင်စတင်ရန်ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာအကျိုးအမြတ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကန်, သင့်ကြွက်သားထုထည်ကိုတိုးမြှင့်ဖို့ရှာဖွေနေပါသလား? Dianabol (methandrostenolone) အမှုန့်သင်၏နောက်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သင့်သည်။ သင်တို့သည်ဤအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါသောအရာကိုအထဲက Find ဟို steroids, အသုံးပြုမှု, ထိရောက်မှုနှင့်ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုရှောင်ကွင်းရန်။
သင်တစ်ဦးလေးနက်ကာယဗလမယ်ဆိုရင်, သင်ပိုကောင်းကြွက်သားထုထည်ရရှိမှု၏ရုန်းကန်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးအားကစားရုံ၌စာရင်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်းအတန်းသို့မဟုတ်အဆုတ်နဲ့တူသူတွေကိုငွီးငှေ့ဖှယျဝင်းလေ့ကျင့်ခန်းသင့်ရဲ့ကြွက်သား toning လုံလောက်မည်မဟုတ်ပါလုပ်နေတာ။
အထဲကအလုပ်လုပ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အများဆုံးသည်းခံခြင်း, ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်အချိန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်မဆိုလို, သင်ရုံ, တစ်ပါတ်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းမှန်ကတဆင့်ကိုယ့်ကိုယ်စစ်ဆေးနှင့်မှော်ပိန်ကြွက်သားကြည့်ဖို့မျှော်လင့်ထားလို့မရပါဘူး။ သို့သျောလညျး, သငျခြောခုနစ်ရက်ပတ်လုံးသင်၏အထဲမှာကြွက်သားကိုတိုးပွါးစေသောအတည်ပြုလိုက်ဟိုစတီရွိုက်နှင့်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းဖြည့်စွက်အားဖြင့်အမြော်အမြင်ရှိရှိပြုမူနိုင်ပါတယ်။
Dianabol (Methandrostenolone) Powder ကဘာလဲ?
Dianabol Powder ၏ဖော်ပြချက်
ကုန်ကြမ်း Dianabol CAS နဲ့ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများကိုအဘယ်သူမျှမပါပဲ။ (72-63-9), C17 ဟိုစတီရွိုက်၏အတန်းပိုင်။ ဒါဟာ 1950 ရဲ့ကတည်းကလူကြိုက်များရရှိထားသူတစ်ဦးခိုင်မာတဲ့ဒြပ် Steroid တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးအဓိကအားဖြင့်သူတို့ရဲ့ကြွက်သားကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ရေတိုကာလ၌သူတို့အစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်ရန်လိုသူအားကစားသမားများနှင့်ကာယဗလအကျိုး။
ဟို steroids hepatoxic ဖြစ်လူသိများကြသည်။ ဒီသက်ရောက်မှုကို minimize လုပ်ဖို့, Dianabol ၏ developer များဟာ 17 မှာမီသိုင်းအုပ်စုတစ်စု affixedth ကာဗွန်၏အနေအထား။ အဆိုပါကို double-နှောင်ကြိုးလည်းဝက်ခြံသို့မဟုတ်အထီးပုံစံဆံပင်ကိုရိတ်နဲ့တူနိုင်သမျှအန်ဒရိုဂျင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလျှော့ချဖို့ကာဗွန်အက်တမ်၏ပထမနှင့်ဒုတိယရာထူးထည့်သွင်းထားသည်။
အခြားအ steroids မတူဘဲ, Dianabol ပရိုတိန်းအမှုန့်အများဆုံးနိုင်ငံများရှိခွင့်ပါပဲ။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးတစ်ဦးအချိန်ဇယား III ကိုထိန်းချုပ်ထားပစ္စည်းဥစ္စာသည်နှင့်သာအထူးသဖြင့်အမေရိကန်အတွက်ဆေးညွှန်းအပေါ်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်
တောင်မှဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်, အမေရိကန်များနှင့်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကအမြဲယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အယူဝါဒအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြား outsmart ဖို့ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အမှန်တကယ်စစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြသော်လည်း, သူတို့သည်အားကစားနှင့်လတူးဖော်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားရိုက်နှက်နှင့်အတူစွဲလမ်းခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ 1940 နှင့် 50 ရဲ့အကြား, ရုရှား, သူတို့ရဲ့အားကစားသမားသုံးပြီးခဲ့ testosterone ဟော်မုန်းထွက်ပစ္စည်းများမှကျေးဇူးတင်စကားအိုလံပစ်ကြီးစိုး။ သို့သော်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုရေတိုနေထိုင်ခဲ့သည့်အခါထိုစဉ်ကအမေရိကန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အိုလံပစ်ဆရာဝန်, ယောဟန် Ziegler, အလှည့်ကွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု outdo တစ်ဦးလေလံမှာတော့သူလည်းအလားတူကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူတက်လာဖို့ Ciba ဆေးဝါးအတူတက်ပူးပေါင်း။
Dianabol (methandrostenolone) အမှုန့် နှောင်းပိုင်း 1950s အတွက်ဖြစ်တည်မှုသို့ရောက်ကြ၏။ ဒါဟာ 1960s နှင့် steroids ကာယဗလအတွက်ခြွင်းချက်ရွေးချယ်မှုအဖြစ် '' 70s အကြားအတော်လေးရေပန်းစားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါအရင်မတူဘဲ, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးစျေးကွက်အပေါ်ပထမဦးဆုံးပါးစပ်ဟို Steroid တစ်မျိုးပါ။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ side-ခြေလှမ်းမှ steroids ၏ဥပဒေမဲ့ဆေးထိုးအားကစားသမားများအားဖြင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလျော့နည်းအန်ဒရိုဂျင်သက်ရောက်မှုရှိပြီးအများဆုံးနိုင်ငံများအတွက်ဆေးညွှန်းကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ D-bol testosterone ဟော်မုန်းထက်နှစ်ကြိမ်အစွမ်းရှိ၏။
ဟို rating 210 100 320
အန်ဒရိုဂျင်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 60 100 45
ဓာတုနှင့် Dianabol Powder ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ
ဓာတုနာမကိုအမှီ 17a-methyl, 17b-hydroxy, 1,1-androstadienone, 3-One
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 72-63-9
(ကို C °) အရည်ပျော်မှတ် 163 - 167
မော်လီကျူးအလေးချိန် 300.442 g / mol
ပျော်ဝင် ·ရေ (9.7 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 25 မီလီဂရမ် / L) ကို
· Glacial acetic acid ကို
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးအမည်များ · Dianabol
Dianabol (methandrostenolone) Powder အွန်လိုင်း Buy လုပ်နည်း
ဟို steroids ဝယ်ယူအနည်းငယ်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ သင့်တည်နေရာအချို့သောပြည်နယ်များဝယ်ယူ, အပိုင်များနှင့် Dianabol အမှုန့်အသုံးပြုမှုအပေါ်ကန့်သတ်ထခန့်ထားပြီကတည်းကသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ခိုင်လုံသောဆေးညွှန်းအောက်မှာမဟုတ်လျှင်ဥပမာအားဖြင့်, methandrostenolone နှင့်၎င်း၏အနကျအဓိပ်ပါယျ၏အသုံးပြုမှုကို, အမေရိကန်, သြစတြေးလျနှင့်ကနေဒါတရားမဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, မက္ကဆီကိုကဲ့သို့သောအခြားနိုင်ငံများတွင်, Dianabol အမှုန့်ကိုဝယ် Sneaker တရံ purchasing သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။
တရားဝင် Dianabol ဝယ်ယူ
D-bol သင့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကန့်သတ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲနေတဲ့လိုင်စင်ကနေတရားဝင်ဝယ်ယူစေနိုင်သည် Dianabol အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ။ ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ။ သငျသညျဆရာဝန်တစ်ဦးထံမှတစ်ဦး legit ဆေးညွှန်းရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, သငျ့စိတျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိအနက်ရောင်စျေးကွက်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပြီ, သဘောတူညီချက်ကျောတံခါးကို အသုံးပြု. လည်းကောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ, သင်တို့မူကားတစ်ဦးအတု, unsterile နှင့်သေစေလောက်ဆေးပေါ်ဆင်းသက်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
ကစတီရွိုက်၏အသုံးပြုမှုကိုတရားဝင်သောပြည်နယ်မှပြောင်းရွှေ့ဖို့မိုရဲ့ပေမယ့်, သင်ဆဲတရားဝင် Dianabol အမှုန့်အွန်လိုင်းစတိုးပေါ်ဘဏ်နဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာနိုင်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး, သင်မြုံနှင့်စည်းမျဉ်းအခြေအနေများအောက်တွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်အာမခံပါတယ်။
ရောင်းရန် Dianabol Powder
အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းစျေးသည်ရောင်းရန်ဟိုစတီရွိုက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့နေကြသည်။ တရုတ်စတိုးဆိုင်အစဉ်အဆက်ရေလွှမ်းနေကြသည်ကတည်းက, သင်အထူးသဖြင့်အမြောက်အများဝယ်ယူမှုအပေါ်, Dianabol အမှုန့်တရုတ်အဘို့အလှည့်ပတ် rummage နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောရောင်းချသူကိုရှာဖွေ, ထိပ်-rated အရင်းအမြစ်, ရေကြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လျက်, အထူးသဖြင့် site ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ရရှိမှုစဉ်းစားပါ။
https://www.proanabolics.com/ ကိုသွားပါသို့မဟုတ်ဤကဲ့သို့သောအခြားမည်သည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသော Dianabol အမှုန့်စက်ရုံ တရုတ်စတိုးဆိုင်.
"Dianabol" ရှာဖွေရေးဘား, အမျိုးအစားပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေ
သငျသညျရေကြောင်းစဉ်အတွင်းထုတ်ကုန်၏လွယ်ကူသောခြေရာခံခြင်းများအတွက် account တစ်ခု register သတိပေးခံရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်ကဧည့်သည်အဖြစ်ထုတ်စစ်ဆေးရွေးချယ်နိုင်သည်။
အဆိုပါ Dianabol အမှုန့်စျေးနှုန်းတဦးတည်းရောင်းချသူထံမှအခြားနှင့်သင်ဝယ်ယူနေတဲ့အရေအတွက်မှကွဲပြားခြားနားသည်ကိုသတိပြုပါ။
မူလစာမျက်နှာမှာ Dianabol Make လုပ်နည်း
သင်တစ်ဦးအဆင်သင့်လုပ် Steroid တစ်မျိုးယ်ယူနိုင်ပါသည်သလောက်, သင်သီးခြားကုန်ကြမ်းဝယ်နိုင်နှင့်သင့်အိမ်လုပ် Dianabol အမှုန့်စာရွက်အတူတက်လာ။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးဖွင့်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းသင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူစာပေးစာယူအတွက်ဆေးထိုးစိတ်ကြိုက်ဖို့ခွင့်ပြုသောဤဖြစ်စဉ်ကိုအကျိုးရှိသည်။
တက်အသုံးပြုမှုနှင့်သောက်သုံးသောအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများအညီကွဲပြားခြားနားထားတဲ့ငါး Dianabol အမှုန့်ကူးပြောင်းချက်ပြုတ်နည်းများမှရှိနေပါသည်။
Benzyl အရက် (BA)
ဆေးထိုးအပ်နှင့်တစ်ဦးမြုံပြွတ် filter ကို
ရဲ့အိမ်မှာ Dianabol စေရန်မည်သို့အသေးစိတ်သို့ delve ကြစို့;
20ml @50 မီလီဂရမ် / ml 250ml / @80 မီလီဂရမ် / ml 250ml @80 မီလီဂရမ် / ml 100ml @50 မီလီဂရမ် / ml 50ml @50 မီလီဂရမ် / ml
D-bol အမှုန့် 1g 20g သို့မဟုတ် 17.86ml 20g သို့မဟုတ် 17.86ml 5g သို့မဟုတ် 5.6ml 2.5g သို့မဟုတ် 2.23ml
Grapeseed ရေနံ 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml အစား (31.77ml) အနီရောင်ရေနံကိုသုံးပါ
ယေဘုယျအားဖြင့် Dbol အမှုန့်ကိုခါးအရသာ, ဒါပေမယ့်အထက်ပါပါဝင်ပစ္စည်းများအရသာကြားပါလိမ့်မယ်။
ဘယ်လို Dianabol (D-bol) အလုပ်လုပ်
Dianabol အမှုန့် ပရိုတိန်း၏ပေါင်းစပ်တိုးမြှင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုတိုးမြှင့်နေချိန်တွင်ဖြိုရာမှကြွက်သားဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများထဲသို့အပေါငျးတို့သကိုလောင်ပရိုတိန်းအာရုံစူးစိုက်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။7ရက်ပေါင်း - ၎င်း၏အတိုတစ်ဝက်-life ကျေးဇူးတင်ပါသည်, သင် 10 အတွင်းအချို့သောမှတ်ပုံတင်အပြုသဘောအပြောင်းအလဲများကိုသတိပွုမိ start ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုသူရဲ့အစာစားချင်စိတ်, ခွန်အားနှင့်စိတ်ဓါတ်များကိုလှုံ့ဆျော။
Dianabol (D-bol) တစ်ဝက်ဘဝ
Dbol4နာရီပေါင်းပျမ်းမျှဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ ကာလဟာသိပ်တိုတောင်းပါတယ်ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, သငျသညျအညီအမျှထိုအသွေးကိုအာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးသောက်သုံးသောခွဲထွက်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးသင်နောက်ဆုံး ယူ. ကာလအချိန်ကနေခြောက်ပတ်အထိရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦးတက်ကြွအားကစားသမားများမှာလျှင်, သင်နှစ်လစမ်းသပ်မှုမပြုလုပ်မီ Dianabol ယူပြီးရပ်တန့်ဖို့သငျ့၏။
Dianabol ရလဒ်များ: ငါသည်အဘယ်သို့ရလိမ့်မည်လော
ဟို steroids အဆိုပါ catabolic ဖြစ်စဉ်များနောက်ပြန်ဆုတ်နှင့်ပရိုတိန်းဟိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ကာယဗလ, သင်ထွက်အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းတိုးတက်လာသောအားသာချက်များကိုခံစားရဖွယ်ရှိပါတယ်။ Dianabol သင်တစ်ဦးသွေးကြောအသွင်အပြင်ကိုမပေးစေခြင်းငှါသော်လည်း, ကအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့ကြွက်သားတွေတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သင်တို့ရှေ့မှထက်ခဝါသည်ကြည့်ရှုစေပါလိမ့်မယ်။
အားကစားရုံ goers စေရန်, Dianabol Steroid တစ်မျိုးသင်၏အစွမ်းသတ္တိတိုးမြှင်နှင့်ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းခံနိုင်ရည်ရှိဖို့သင်လုံပေးခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်သည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးပြန်လည်အချိန် accelerates နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေ။
Methandrostenolone ကျန်းမာအလေးချိန်ရရှိမှုသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အခက်အခဲများရှိသည်သောလူနာအတွက်အကောင်းဆုံးဆေးညွှန်းသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်သင်ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲအတွက် 20 ပေါင်မှတက် add စေနိုင်သည်။
testosterone Levels နဲ့ Boost
သငျသညျအနိမ့် testosterone ဟော်မုန်းအခွအေနေကနေဆင်းရဲခံရလျှင်, သင့်ဆရာဝန်ထိုကဲ့သို့သော Dbol အဖြစ်ဥပဒေရေးရာ steroids သတ်မှတ်ဖွယ်ရှိသည်။
အထူးသဖြင့်အရေပြားအစားထိုး, ခွဲစိတ်, ဒါမှမဟုတ်အပူလောင်ပြီးနောက်, နိုက်ထရိုဂျင် retention ကိုများနှင့်တစ်သျှူးပြုပြင်တိုးမြှင့်။ ထို့အပြင် Dianabol သွေးအားနည်းရောဂါ၏တိကျသောအမျိုးအစားများကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်။
Dianabol (D-bol) သောက်သုံးသောနှင့်အသုံးပြုမှု (Dianabol ယူကကို Safe Is?)
အဆိုပါစံ Dbol သောက်သုံးသော 15 နှင့် 50mg / နေ့အကြားနေကြပါတယ်။ သို့သော်အချို့အတွေ့အကြုံရှိအသုံးပြုသူများသည်တစ်နေ့လျှင် 100mg သလောက်ကိုအသုံးလိမ့်မယ်။ သတိပြုပါရန်အများဆုံးသော့ချက်အချက် steroids မြင့်မားဆေးများအများဆုံးဖွယ်ရှိသည်သင်၏သွေးဖိအားကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။
အမျိုးသမီးများနှင့်သာမန် 15mg ထက်ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုကိုမယူသင့်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးအားကစားသမားများအတွက်အများဆုံးနေ့စဉ်သောက်သုံးသော 30mg ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထက်ပိုမိုမြင့်မားမဆိုတန်ဖိုးကအထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အခြားနောက်ကြောင်းပြန်မလှည် dbol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။
2 ကြိမ်တစ်နေ့လျှင် - Dbol ဤအရပ်, ထိုသောက်သုံးသော3ခွဲရန်လိုအပ်ကြောင်းတိုတောင်းတဲ့ဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်။ ဒါဟာပျို့များကဲ့သို့ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုး minimize လုပ်ဖို့မုန့်ညက်ကြိမ်လှည့်ပတ်မူးယစ်ဆေးယူအကြံပြုလိုတယ်။ Dianabol ၏ bioavailability တိုးမြှင့်ဖို့တစ်ခုမှာသေချာလမ်းသင့်ရဲ့အစားအစာအတွက်ပျစ်သီးထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Dbol နှုတ်ယူနိုင်သောပထမဦးဆုံးဟို Steroid တစ်မျိုးပါ။ မူးယစ်ဆေးလူကြိုက်များသောရရှိနိုင်ပါနှင့်တက်ဘလက်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားပေမဲ့, သင်အသားထိုးဆေးကနေတဆင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရလဒ်များကို, သင် Durabolin, testosterone ဟော်မုန်း, Primobolan, ဒါမှမဟုတ် trenbolone ကဲ့သို့အခြား steroids အသုံးပြု Dianabol stack လက်ခံသင့်ပါတယ်။
30mg - ပုံမှန် Dianabol သံသရာ 50 ပမာဏတစ်ခုထိုးနှင့်အတူလေးနှင့်ခြောက်ပတ်အတွင်းအကြားကြာရှည်ခံသည်။ ကာလအတွင်း, အသည်းပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဘို့ cardarine နှင့် N2guard ၏နေ့စဉ်ထိုးနှင့်အတူ Steroid တစ်မျိုးသီးနှံများကိုပုံမှသေချာပါစေ။ Aromasin လည်းအီစထိုဂျင်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ရေ retention ကိုတာဝန်ရှိသည်တည်းဟူသောမွှေးကြိုင်တားစီးဖို့လက်၌လာသင့်ပါတယ်။
Dianabol ရလဒ်များကိုကတာ၏ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းများသောအားဖြင့်သိသာဖြစ်ကြသည်။ ဒီနေရာတွင်အပြည့်အဝသံသရာကနေရရှိနိုငျဘယ်လောက်အလေးချိန်တခုတခုအပေါ်မှာခန့်မှန်း၏,
ကာလ (ရက်သတ္တပတ်) mass (ပေါင်)
ခြောက်ပတ်အဆုံးမှာက pituitary ဂလင်းထဲမှာဟော်မုန်းဖိနှိပ်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ Post-သံသရာကုထုံးစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်, သံသရာအတွက် testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်, သင်စုဆောင်းထားသောကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးမည်ကို စိုးရိမ်. ပုံမှန်အဆင့်ကိုပြန်သေချာစေရန်တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်ပါတယ်။ အဆိုပါကုထုံးလေးပတ်အထိကြာမြင့်ပါသည်။
Dianabol (D-bol) Side Effect: အဘေးထွက်သက်ရောက်မှုရှောင်ကြဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
Dianabol Steroid တစ်မျိုးကတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့်အန္တရာယ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေချိန်မှာသင်ကအမြော်အမြင်ရှိရှိအသုံးပြုရန်သာလျှင်အကျိုးရှိပါတယ်။ ပိုငျသညျပြင်းထန်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြုံနေရ၏မြင့်မားဖြစ်နိုင်ခြေကို, အသောက်သုံးသောတိုးမြှင့်။
ရေ retention ကိုသို့မဟုတ်ဖောင်း
အဆိုပါ pituitary gland ၏ဖိနှိပ်မှု
Virilization သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောနက်ရှိုင်းသောအသံ Chord, ပုံမှန်မဟုတ်သောဆံပင်၏ကြီးထွားမှု, ဒါမှမဟုတ်အစေ့၏ပျတိုးအဖြစ်အမျိုးသမီးအတွက်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများ။
မကောင်းတဲ့ LDL လက်စထရောလ်တစ်ခုတိုးခြင်းနှင့်ကောင်းသော HDL လက်စထရောအတွက်လျော့နည်း
တစ်ဦး aromatase inhibitor သို့မဟုတ် anti-အီစရိုဂျင်အသုံးပြုပါ
Dbol အီစထိုဂျင်သို့ aromatizing တစ်ဦးစိတ်သဘောထားရှိပါတယ်။ ဒီဟော်မုန်း၏အလွန်အကျွံကိုယ်ခန္ဓာ၌ရှိသည့်အခါရလဒ်ရေ retention ကို, ဖောင်း, မျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, gynecomastia, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ကြသည်။
သတငျးကောငျးကိုသငျသညျအီစထိုဂျင်သို့ dbol ၏ပြောင်းလဲခြင်းပိတ်ဆို့ဖို့တစ်ခု aromatase inhibitor ကိုသုံးနိုင်သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ တချို့ကဥပမာ letrozole, Aromasin နှင့် Arimidex ပါဝင်သည်။ သင် Dianabol သံသရာနှင့် post ကိုသံသရာကုထုံးစဉ်အတွင်းထိုအဖြည့်စွက်ယူအာမခံပါသည်။
အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက် oxidant ကြောင့်ထိခိုက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်အသည်းအဆိပ် minimize သငျ့သညျ။ ဒါကြောင့်နို့ဆူးပင်ပါရှိသည်ဆိုလျှင်, NAC, TUDCA အခြားကြွယ်ဝသောပါဝင်ပစ္စည်းများတို့ကြောင့်ဥပဒေကြမ်းကိုက်ညီဆိုလိုသည်။
သင်ကလက်စထရောအဆင့်ကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်သတ္တုဓာတ်နှင့် တွဲဖက်. Dianabol ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအ Add-ons တွေကိုအချို့မှာအနီရောင်ဆေးဆန်, ငါးဆီ, niacin, ဒါမှမဟုတ် Co-အင်ဇိုင်း Q10 ပါဝင်သည်။
အများအားဖြင့်, ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏကိုအဆိုပါ Dbol သံသရာကာလအတွင်းလုံလောက်သောလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အဆင့်နိမ့်ပြေးလျှင်, ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုဖြစ်စဉ်ကိုလည်းခေတ္တရပ်ဆိုင်းထားပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်, Dianabol နှင့်အတူအချို့သော testosterone ဟော်မုန်းဖြည့်စွက် stacking သင်သည်သင်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။
အိုမီဂါဖက်တီးအက်ဆစ်နှင့်ကျန်းမာပရိုတိန်းကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုယူပါ။ high-အဆီအစားအစာများဤအရပ်, သွေးဖိအားအဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးလာရေ retention ကို၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဖြစ်ကြသည်။
Beginners 20mg / နေ့တစ်ထိုးထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ အချို့သောဝါရင့်ကာယဗလအဆိုပါ Steroid တစ်မျိုး၏ 100mg မှတက်တာအန္တာရာယ်မယ်လို့သော်လည်း, အလေ့အကျင့်မလုံခြုံသည်။ သင်အရေအတွက်တိုးမြှင့်ဖို့ရှိပါက 50mg အားလုံးမှန်သည်။ အမြင့်သောက်သုံးသောထိုသို့သောသွေးပေါင်ချိန်၏မြင့်အဖြစ်စူးရှသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ကိုက်ညီ။
အဆိုပါ Dianabol သံသရာခြောက်လနှင့်ရှစ်ပတ်ကြာအကြားကြာရှည်သင့်ကြောင်းသတိပြုပါယူပါ။
သားသမီးတို့, ဆယ်ကျော်သက်, ဒါမှမဟုတ် 30 နှစ်ပေါင်းထက်မည်သူမဆိုအသက်ငယ်
ကလေးတွေမှာတော့ Dianabol ယူပြီးအရိုးရငျ့နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်အယှက်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Steroid တစ်မျိုးသန္ဓေသားမူမမှန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြစေခြင်းငှါ
ကြီးမားတဲ့ Mass ရရှိ
သင်သောက်သုံးသော start ကိုချက်ချင်းသက်ရောက်မှုကိုသတိပွုမိကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ပုံများခြားနားချက်ကိုသတိပြုပါရန်မီနှင့်အပြီးသင်ကပင် Dianabol နှိုင်းယှဉ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ခဝါသည်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်, သင်သိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။
အားကစားခန်းမမှာလေ့ကျင့်ခန်းနေစဉ်, သငျသညျပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်မိုးသည်းထန်စွာလေးရုတ်သိမ်းပေးရန်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းသတ္တိအားများပါလိမ့်မယ်။ သံသရာ၏အဆုံးအားဖြင့်, သင်သည် 20lbs နီးစပ်သူတစ်ခုခုရရှိခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအနည်းငယ်တို့တွင် ဥပဒေရေးရာစတီရွိုက် သောကြီးထွားဟော်မုန်းမြှင့်တင်ရန်။ သင်တစ်ဦးကျန်းမာသောအစားအစာနှင့်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အတူ Dianabol stack ပေါင်းစပ်လျှင်, Steroid တစ်မျိုးမှော်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သငျသညျအခြို့သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဖို့သော်လည်း, သင့်ခန္ဓာကိုယ်အဆီသိသိသာသာလျော့ကျစေပါတယ်။
ရောင်းရန်အများစုမှာ steroids ထိုးဆေးဖြစ်တယ်။ သို့သော် Dianabol နှုတ်ဆေးပြား, တက်ဘလက်, တောင့, ဒါမှမဟုတ်အရည် form မှာကတဆင့်အုပ်ချုပ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ Dianabol အမှုန့်စာရွက်ပြုပါနှင့်သောက်သုံးသောစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
အသေအပျောက်အများဆုံး dbol ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမြင့်မားတဲ့သွေးဖိအား, အသည်းပျက်စီးမှုနှင့် gynecomastia ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့ရင်ဘတ်ထက်နည်းတစ်ပါတ်အတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းအပြည့်အဝဖြစ်လာဆိုတဲ့အချက်ကိုတစ်တားဆီးရန်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျပုဂ္ဂိုလ်ရေးစည်းကမ်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်အောက်ပါအားဖြင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး၏ကျန်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပေမယ့် gynecomastia မထိန်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမူးယစ်ဆေးကိုချွတ်ထားရန်ကာယဗလစေသောအခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးမပွားနိုင်ခြင်း, နှလုံးရောဂါပြဿနာများ, အသည်း၏အပျက်အစီး၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။
သငျသညျဟို steroids အကြောင်းကြားရသည့်အခါပေါင်းများစွာမေးခွန်းများကိုဧကန်အမှန်အသင့်ရဲ့စိတ်ကိုတဆင့် Race ပါလိမ့်မယ်။ "Dianabol ဥပဒေရေးရာလား?","ငါခိုင်လုံသောဆေးညွှန်းမရှိဘဲထိုးရနိုင်သလား?","ဘယ်အချိန်မှာစတီရွိုက်ကိုတီထွင်ခဲ့ကြသလဲ"နှင့်ဆင်တူမေးမြန်းချက်။ အထက်ပါဆောင်းပါးသင်တွေ့ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့ကြရတယ်အားလုံးအဖြေရှိပါတယ်။
ရောင်းရန် Dbol 1960 နှင့် 1970 steroids ကာယဗလခေတ်အကြားကျယ်ပြန့်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး FDA ကတစ်လူတန်းစား III ကိုပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်ခွဲခြားနှင့်၎င်း၏စားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာတော့ Dianabol သာဆေးညွှန်းကနေတဆင့်ရရှိနိုင်ပါတယ်။
11291 Views စာ
အဆိုပါထိပ်တန်း 10 testosterone ဟော်မုန်း Ester: သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်သော? Oxymetholone ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း: Oxymetholone ၏ Ultimate လမ်းညွှန် (Anadrol)